AMAGUMBI alungileyo kwi-COMPETITIVE RATES kufutshane neTempile yaseNurani
Igumbi lakho lokulala e indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo sinombuki zindwendwe onguRanga And Jaya
Yiva inkcubeko enkulu yePalakkad, kule Brand ENTSHA ifakwe AMAGUMBI kwi-1-2 BHK Flats.
Amagumbi kunye ne-terrace ziyilelwe ukuba zinikeze umbono omkhulu we-SASTHA TEMPLE kunye neendawo eziyingqongileyo ezinemithi yekhokhonathi eshukumayo, i-Temple Pond & Greenery
Kumganyana nje amanyathelo ambalwa ukusuka kwisakhiwo, indawo yokumisa iimoto, indawo yokumisa ibhasi, ukuba kufuphi nezinye iitempile, iKaavus, iivenkile, 50+ iivenkile zokutyela zasekhaya ezibonelela ngokutya okumnandi/iincasa zasePalakkad.
IFull Flat iyafumaneka xa uyicela.
Yiza uhlale nathi kwaye wonwabele amava amnandi!
Kukho zombini 1 kunye 2 BHK (Igumbi lokulala-Iholo-Kitchen) iinketho ezikhoyo onokukhetha kuzo. Iyunithi nganye inegumbi lokuhlala elibanzi, igumbi lokuhlambela / iis, ikhitshi kunye neebhalkhoni. Ukongeza, esi sakhiwo sinendawo yangaphandle enendawo entle, kunye negaraji enkulu yokupaka enokuthi isetyenziswe njengeHolo yoMsebenzi wokuHlangana, ukuqhuba iminyhadala kunye nemibhiyozo.
Indawo yokupaka ebhatalelwayo eseyadini
Le ndawo ingcwele kakhulu kumaHindu kulo lonke ilizwe. Nangona singathinteli naluphi na undwendwe ngokobuhlanga okanye inkolo, sicebisa ukuba iindwendwe zinxibe ngokundilisekileyo kwaye ziqonde izithethe zasekuhlaleni. Iindawo ezithile zeetempile zaseNurani zinokuba zithintelwe kwimida esekwe kulawulo lonqulo.
Umbuki zindwendwe ngu- Ranga And Jaya
Ifumaneka ngokukhawuleza ngefowuni, i-imeyile kunye no-whatsapp.
Iilwimi: English, हिन्दी, Bahasa Indonesia
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Palakkad